Unyana wam ulikhoboka leselula | Oomama Namhlanje
UToñy Torres | 14/05/2021 20:00 | Iingcebiso
Abantwana banamhlanje bazalelwa kubuchwepheshe, baqhele ukukhula kwizixhobo eziphathwayo kwaye unokufikelela kwi-intanethi nanini na, naphi na. Nditsho nezincinci zibonakala ngathi zinako ukuphatha i- ifowuni, xa bengazi nokuba yintoni. Nangona ubuchwepheshe obutsha buye benza izinto zaba lula, zisengumngcipheko ngeendlela ezininzi.
Umlutha weselfowuni sele uyinyani, abantu abaninzi baxhomekeke kwezi zixhobo kwaye baneengxaki ezahlukeneyo ezinxulumene noko. Ixhala lokwahlukana, iziqendu zelahleko ngokweemvakalelo Xa ungenakho ukufikelela kwiiselfowuni okanye kwiinethiwekhi zonxibelelwano, zezinye zezi zifo zichaphazela nabantwana. Ukuba ucinga ukuba umntwana wakho ulikhoboka leselula, kubalulekile ukuba ungenelele ngokukhawuleza.
1 Wazi njani ukuba umntwana wam ulikhoboka leselula
2 Ukunceda umntwana oxhomekeke kubuchwepheshe
Wazi njani ukuba umntwana wam ulikhoboka leselula
Ukuba ucinga ukuba umntwana wakho ulikhoboka leselula kodwa kufuneka uyiqinisekise, lumkela le miqondiso yesilumkiso:
Inxulumene kuphela kwi-intanethiInye into kukuthetha nabahlobo kwiselfowuni kwaye enye kukunxibelelana ngokukodwa ngayo. Ukuba unyana wakho ayiphumeli ngaphandle, ayidibani nabahlobo kwaye uchitha ixesha elitshixiwe egumbini lakhe kunye neselfowuni, luphawu lwesilumkiso olucacileyo.
Ibeka yonke eminye imisebenzi: Inkwenkwe yeka ukwenza umsebenzi wakho wasekhaya, ungayihoyi impilo yakho mihla le, ulala iiyure ezimbalwa okanye ukusebenza kwesikolo esiphantsi.
Guqula indlela abaziphethe ngayo: Xa kufuneka ushiye iselfowuni kuyo nayiphi na imeko, uchithe ixesha ungekho ekhaya, uyokutya nosapho okanye uthathe nje iselfowuni okwethutyana, umntwana ingabonisa isimo sengqondo sokuhlaselwa.
Ujongene nolu hlobo lokuziphatha, kubalulekile ukuba ungenelele ukuze ufumane isisombululo ngaphambi kokuba ingxaki ibe mbi. Ngokwazisa ezinye iinguqu kunokwenzeka ukulawula umlutha kwiselfowuni yomntwana, kodwa okuya kuthatha ixesha elide ukufumana isisombululo, ingxaki iya kuba mbi ngakumbi. Ukuba ucinga ukuba umlutha awusalawuleki kwaye awukwazi ukufikelela kumntwana wakho, funa uncedo lobungcali ukunceda umntwana anciphise ukuxhomekeka.
Ukunceda umntwana oxhomekeke kubuchwepheshe
Akukho zibophelelo, okanye unxunguphalo, okanye imilo yosapho, engadibaniyo kwezi meko. Umntwana akazi ukuba unengxaki yokulutha, ke awuyi kuqonda ukuba kutheni ngoku ungenakuba nayo iselfowuni ngendlela eqhelekileyo. Ukuqala ukulungisa le ngxaki, kuya kufuneka uthethe nomntwana wakho malunga nemicimbi enjengokusetyenziswa ngendlela efanelekileyo kwezonxibelelwano okanye imfundo elungileyo yedijithali.
Oko kukuthi, iselfowuni akufuneki isetyenziswe xa kutyiwa etafileni. Isandi sinokuphazamisa abanye abantu, ke kufuneka sisuswe umthamo kwiindawo zikawonke-wonke okanye xa abanye abantu bethetha, phakathi kweminye imizekelo. Ukuba nemithetho kubalulekile ebantwaneni, kuba kungenjalo abafundi okulungileyo kokungalunganga.
Kwakhona, ungazisebenzisa ezi ngcebiso:
Cima iselfowuni: Umntwana makahambe ukushenxwa kunye nokuphuma kwegumbi ukulala kakuhle kwaye unqamule iinethiwekhi.
Yenza imisebenzi yosapho: Gcina umntwana ndixakeke neminye imisebenzi Iya kukunceda ulibale ukuxhomekeka ekusetyenzisweni kweetekhnoloji.
Yiba ngumzekelo omhle kumntwana wakho: Kuphephe ukusebenzisa mobile yakho xa ukunye nabantwana. KUNYEigama nomzekelo wakho ukuba iselfowuni sisixhobo esibalulekileyo, kodwa akukho ngaphezulu kosapho.
Inqanaba eliqingqiweyo lokuhambaUkulawula ukusetyenziswa kweselfowuni xa umntwana engekho ekhaya, kuyacetyiswa ukuba inqanaba lilinganiselwe. Ke xa inqanaba liphelile, kuya kufuneka ulinde de kube yinyanga elandelayo ukuze ubuyele esitratweni. Oku kuya kuba ngumsebenzi wokuzibamba igqibelele eya kukunceda kweminye imibuzo emininzi.
Kubaluleke kakhulu ukwenza njengoko kufuneka ukwenze ngendlela efanelekileyo. Ukuthatha ifowuni yakho kuya kwandisa kuphela umnqweno wokuyisebenzisa, Ukuthintela ukusetyenziswa kwayo kuya kudala ukudideka kunye nomsindo. Kwelinye icala, ukwazisa utshintsho oluncinci ngaphandle kokuqonda ukuba kuya kunciphisa ukusetyenziswa kweselfowuni, iya kuba lolona nyango lulungileyo kumntwana wakho. Yiba nomonde kwaye uhloniphe umntwana wakho, ukuze azi ukuba kuyo nayiphi na imeko, uya kuba secaleni kwakhe ukumxhasa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Intsapho » Iingcebiso » Unyana wam ulikhoboka leselula
Iintsapho kunye neenkcubeko: zahlukile kodwa ziyafana